စျေးပေါသောဒေါင်လိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်မြေ ation ဇာထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်စက်ရုံထုတ်လုပ်ခြင်း YiZheng
The ဒေါင်လိုက်ဆွေး ကစော်ဖောက်ခြင်း Tank အဓိကအားဖြင့်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုတိရစ္ဆာန်ချေး၊ ရွှံ့နွံများ၊ သကြားစက်မှရွှံ့များ၊ အစာမစားဘဲကောက်ရိုးကျန်ရှိသော sawdust နှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို an အောက်ဆီဂျင်မဲ့ဖောက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်ကိုအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ၊ ရွှံ့နွံများစွန့်ပစ်စက်ရုံ၊ ဟော်ရီကာချာစိုက်ခင်းများ၊ နှစ်ဆပေါက်ပြိုကွဲခြင်းကိုကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်ရေလည်ပတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
စက်ကို10ရိယာ ၁၀-၃၀ မီတာအကျယ်ရှိသည့် ၂၄ နာရီခန့်ချဉ်နိုင်သည်။ တံခါးပိတ်အချဉ်ပေါက်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်ပိုးမွှားများနှင့်၎င်း၏ဥများကိုလုံး ၀ ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်အတွက်အပူချိန် ၈၀ မှ ၁၀၀ to အထိချိန်ညှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပေါင်းဖိုအား ၅-၅၀ m3 အမျိုးမျိုးသောစွမ်းရည်၊ ပုံစံအမျိုးမျိုး (အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်) ကစော်ဖောက်ခြင်းအကြံပေးစက်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဒေါင်လိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်မြေသြဇာအချဉ်ဖောက်စက် တိုတောင်းသောကစော်ဖောက်ခြင်းကာလ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, သေးငယ်တဲ့coverရိယာနှင့်ဖော်ရွေပတ်ဝန်းကျင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ပိတ်ထားသောအေရိုးဗစ်ကစော်ဖောက်ခြင်းအကြံပေးစနစ်တွင်စနစ် ၉ ခုပါ ၀ င်သည်။ အစာကျွေးစနစ်၊ silo ဓာတ်ပေါင်းဖို၊ ဟိုက်ဒရောလစ်မောင်းစနစ်၊ လေဝင်လေထွက်စနစ်၊ စွန့်ပစ်စနစ်၊ ကောက်ရိုးနှင့်ပိုးမွှား inoculum ကဲ့သို့သောအစိုဓာတ်အနည်းငယ်ကို ၄ င်းတို့၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့်အပူတန်ဖိုးအရပေါင်းထည့်ရန်အကြံပြုပါသည်။ အစာကျွေးခြင်းစနစ်အား silo ဓာတ်ပေါင်းဖိုထဲသို့ထည့်သွင်းသည်။ Silo အတွင်းရှိစဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်မှုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေရန်မောင်းနှင်သည့်ယန္တရား၏ impeller ဓါးသွားများကမစင်များကိုထိတ်လန့်စေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စက်ပစ္စည်း၏လေနှင့်အပူပြန်လည်ထုတ်ယူသောကိရိယာများသည် aeration impeller ဓါးသွားများအတွက်ခြောက်သွေ့သောလေပူများကိုပေးသည်။ Blade ၏နောက်ဖက်တွင်ပူပြင်းသောလေထုနေရာတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရေမစိုစေခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်တို့အတွက်ပစ္စည်းနှင့်အပြည့်အဝထိတွေ့နိုင်သည်။ အဆိုပါလေကိုစုဆောင်းနှင့်ဆေးကြောများ၏အောက်ခြေကနေ stack မှတဆင့်ကုသနေကြသည်။ ကစော်ဖောက်ခြင်းအတွင်းကန်အတွင်းရှိအပူချိန်သည် ၆၅-၈၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရောဂါပိုးအမျိုးမျိုးကိုသေစေနိုင်သည်။ အချဉ်ပေါက်ပြီးနောက်ပစ္စည်းတို့၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် ၃၅% ခန့်ရှိပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည်လုံခြုံပြီးအန္တရာယ်ကင်းသောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်သည်။ အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုသည်ပိတ်ထားသောတစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ ထိပ်ဆုံးပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့်အနံ့ကိုစုဆောင်းပြီးနောက်ရေမှုတ်ဆေးဖြင့်ဆေးကြော။ deodorized ဖြစ်ကာစံသတ်မှတ်ချက်သို့ရောက်သွားသည်။ ၎င်းသည်မျိုးဆက်သစ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအချဉ်ဖောက်စက်ဖြစ်ပြီးအလားတူစက်ကိရိယာများကို အခြေခံ၍ အမျိုးမျိုးသောဒေသများအတွက်သင့်လျော်သည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာအဆင့်နှင့်စျေးကွက်အများစုကမျက်နှာသာ။
၁. ဒေါင်လိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်မြေသြဇာအချဉ်ဖောက်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများသည်ဝက်ချေး၊ ကြက်ချေး၊ နွားချေး၊ သိုးမြေ, ဇာ၊ မှိုစွန့်ပစ်မှု၊ တရုတ်ဆေးဝါးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံနှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၂။ အန္တရာယ်ကင်းသောကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန် ၁၀ နာရီသာလိုသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုနည်းသောဖုံးအုပ်မှုအားသာချက်များရှိသည်။ (ကစော်ဖောက်စက်သည် ၁၀ 10ကစတုရန်းမီတာသာအကျယ်ရှိသည်) ။
၃။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသဘာ ၀ အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုခြင်းကိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ မြို့ပတ်ရထားစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၄။ ထို့အပြင်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ ၅၀-၁၅၀ မီတာ (၃) မတူညီသောစွမ်းရည်နှင့်ကန့်သတ်ချက် (ကန့်သတ်အလျားလိုက်ဒေါင်လိုက်) အချဉ်ဖောက်နိုင်သည်။
၅။ ကစော်ဖောက်ခြင်း၊ လေထုတ်ခြင်း၊ အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် deodorization ပြုလုပ်ရာတွင်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
၁.On လိုင်း CIP သန့်ရှင်းရေးနှင့် SIP ပိုးသတ်ခြင်း (121 ° C / 0.1MPa)၊
3. အချင်းနှင့်အမြင့်အကြားသင့်လျော်သောအချိုး; ရောနှောထားသောပစ္စည်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်မှုအရစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ နှိုးဆွခြင်း၊ ကစော်ဖောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကောင်းမွန်သည်။
၄။ အတွင်းပိုင်းတိုင်ကီသည်မျက်နှာပြင်ကိုဆေးကြောခြင်း (အကြမ်းအားဖြင့် Ra ၀.၄ မီလီမီတာအောက်) ရှိသည်။ ဒါပေါ်မှာရှိသမျှထွက်ပေါက်, မှန်, люနှင့်။
•မြို့ / ဘဝ၊ အစားအစာ၊ ဥယျာဉ်၊ မိလ္လာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်း
•အတွင်းပိုင်းသည်သံမဏိပြားဖြစ်ကာ ၄-၈ မီလီမီတာအထူရှိသည်
•composting အပူချိန်တိုးတက်စေရန်အလွှာဂျာကင်အင်္ကျီ insulator တွင်လည်းနှင့်အတူ
•လွယ်ကူစွာ အသုံးပြု၍ ထိန်းသိမ်းထားပြီးကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးသို့ရောက်နိုင်သည်
•လှော်ရောစပ်သည့်ရိုးသည်ပြည့်စုံပြီးအပြည့်အဝရောစပ်။ ရောစပ်။ ရသောပစ္စည်းများကိုရောက်ရှိနိုင်သည်
Chain Plate ဆွေး Turner စက်ဗီဒီယိုကိုပြသခြင်း
ရှေ့သို့ နှစ်ဆဝက်အူဆွေး Turner
နောက်တစ်ခု: Forklift အမျိုးအစားဆွေးပစ္စည်း